Iimaamkii MASJID QUBA “Waxaan hadda ogaaday in ay Maxkamadda iiga horreeyeen” - Somnieuws.com
Iimaamkii MASJID QUBA “Waxaan hadda ogaaday in ay Maxkamadda iiga horreeyeen”
Khilaafkii u dhexeeyay Guddiga masjid Quba, oo ah masjid Soomaalidu leedahay ayaa gaaray halkii ugu sareeysay kaddib markii iyada oo laga dhur-sugayo in bisha dambe [Febraayo] ay Maxkamadu dhageysato doodaha ay qabaan 2da dhinac ee uu khilaafku u dhexeeyay oo kala ah; Guddoomiyaha Guddiga masjidka, ahaana iimaamkii masjidka Shiikh Suldaan Gasle oo dhinac ah & Shiikh Ibraahim [Abuu-khadiija] & Guuleed Wayrax oo dhinaca kale ah mar qura laga war-helay warqad Maxkamadeed oo soo gaartay Shiikh Suldaan Gasle, oo qudhiisa lagu eedeynayay inuu masjidka dacweeyay.
1] In meelmar ay noqoto doodda ragga masjidka ku haray, Shiikhana laga guuleysto.
1] In ragga masjidka ku haray lagu qasbo in ay wada shaqeeyaan iyaga & Shiikha, lana yiraa, Shiikh Suldaan ha lagu soo celiyo xilkiisa shuruud la’aan.
3] In 2da dhinac laga wareejiyo mas’uuliyada masjidka, laguna wareejiyo dhinac 3aad, oo noqon kara dad aan muslim aheyn in ay masjidka maamulaan.